Maxamed Mooge &Heesta (Caana diid ) | Iftiin.WordPress.com
Aqoon la'aani waa iftiin la'aan.
← Wax la waayey geellow ninkii waalan baa u duda
Sawiro layaab leh !! →
Maxamed Mooge Liibaan (AHN)
fanaankii waynaa ee caanka ahaa Maxamed Mooge Liibaan ala how naxariistee wuxuu ahaa fanaan heeso badan qaaday, oo aan la koobi karin hadaba heesahaa maxaad ka taqaanaa? haday tahay abwaaniinta tiriyey .
hadaan waxa ka taabto heesahaa Maxamed mooge qaadi jiray, anigu waxaan ugu jecelay heesta magaceeda la yidhaado Caano diid ee uu areyadeedana uu curiyey ama hal abuuray abwaanka wayn Ciise Warsame ( ciise dhan-cade) oo ah abwaan loo qiray inuu yahay abwaanka ugu ereyo waawayn abwaanada soomaaliyeed , heeso badana sameeyey sida ( gufaaco,gobayaal, iyo heeso kale oo badan ) waxaana heestan caana diid codka ama naaxiyada u sameeyey fanaankiinee caanka ahaa Maxamed warsame qaasaali oo isaguna aad igu xeel dheer codanyta heesaha isaga ahaa xiligaas fanaaniinta heesta safka hore waxaananu xidigna ka ahaa riwaayadii la o dhan jiray hadimo ee uu sameeyey awbaanka wayn Maxamed ibraahim hadraawi iyo riwaayado kaleba waana sidan heestu;-
Maxamed Warsame Qaasaali
heestu waxay ku bilaabantaa araar aad u qurux badan oo abwaanku ku muujiyey af soomaaliga uu hodanka ka yahay iyo hal abuur aad u xeel dheer waana sidan;-
cirkoo galab hilaacoo caraabinaaya waqalada
gelin caadadiisii cadad baxay shan iyo toban
casar iyo hilaacu uu aad biyo camal shubaayoo
rahu caana diidkii isa soo cayaar roray
cosob hooray cirkoo loo oo ku celcelyey mayeyguna
caadada barwaaqada midho caar guduudiyo
curdinkii isugu jira badhna ay casaadeen
dhirtu ay la ciirtoo cid ka gurata waydoo
shinbiruhu ka ciyayaan waxaan kaga calool sanay
anoo canab la moodyey gogol kugulaa caweeya.
bilowga heestuna waa sidan;-
cajabeey aduunyada waagii cadaadaba
curub geed ka lula too naftu ay calmadatiyo
cadibaad ma waydee waa maxay cir jiidhani
cadwaliba tilmaanlee siduu caadilkeeni yidhi
waa ruux cawaysan cidba looma uumine
luqtiyo cabaadhyaha is calaamadeyaa
cawo daran iqaadee waxaad camabka moodaa
cir daruur cusbeeyee cosob soo dilaaciyo
waa laan caleenoon ka hadhsado cadceedee.
Maxamed Mooge &Heesta (Caana diid )
By M Ismail  Tagged Uncategorized
7 comments on “Maxamed Mooge &Heesta (Caana diid )”
Oktoobar 10, 2008 @ 2:35 b
waa hees wacan aad ayaad walaal u mahadsan tahay
Oktoobar 11, 2008 @ 1:08 b
sxb heestaa wali maan maqline goorma ayuu M.mooge qaaday?
Oktoobar 18, 2008 @ 10:41 b
yasaal saxiib sharax fiican ayaad heestaa ka bixisay waxaana maanta ii kow ah inaan arko fanaanka wayn maxamed warsame , oo ah fanaaniinta aan aad iyo aad codkooda uga helo waanan ku farxay inaan sawirkiisa arko M.ismaaciil waad mahadsanthay saxiib.
Diseembar 4, 2008 @ 12:42 g
qaasaaali waa fanaan aad u cod macaan heesihiisan anigu si gaar ah ayaan u xiiseeyee , heestaa aad jor ku hustay M.ismaaciil waa hees aad u qiimo badan m. mooge si qurux badan ayuu u qaaday saaxiib adoo mahasan heestaa xagee laga heli karaa waxaa iigu dambaysay 17 sano ka hor.
Janaayo 22, 2009 @ 12:32 g
scw… walaal waad salaaman tahay su.aal ayaan ayaan rabaa inaad iiga jawaabtaan .. Maxamed warsame qaasaali heesihiisa miyey ka mid ahayd hees la yidhaado ( diiilalyood) oo magoolna u jiibiso.
Janaayo 23, 2009 @ 1:29 g
jamiila waad salaaman tahay .. runtii aad ayaad u dhagaysataa heesaha siiba hoosihii hore ee qiimaha lahaa taasna waxay ka muuqataa heestan aad i soo waydiisay. heestaa(diilal-yood) waxa qaada M.warsame waxaana u jiibisa xaliimo khaliif (magool) waxaana ereyadeeda curiyey abwaanka wayn M.ibraahim (hadraawi) waxaana ereyadeeda ka mid ah (( waan dubjiroo da’deed uga hadhoo ,, dumar uga go’oo ayday ila degtee ,, meel doog lahoo aan degi jiray ay damaqdayoo diilalyoonayaa)) .
heestaa iyo heeso kale oo badan ayuu m.warsame qaadaa sida ( igu soo dhawoow , asaagaa oo labada la qaado sahra siyaad iyo heeshii riwaayadii hadimo ee xaliimo khaliif magool la qaaday ala how naxariistee.
waxaa kale uu qaasaali sameeyee heesaha sida ( soomal haad , dalxiis , tan iyo sula ,,,,
Abriil 4, 2015 @ 4:17 b
Waa hees wanagsan waxa codkiisi loxdanaa ku qaaday alle ha u naxariste muj. M.M.L lkn dhawr bayd oo danbe aya ka maqan waad dhamaystiri doonta insha allaah